पेजोक/PEZOK : 2015
रूपेशका नेपाली कविताहरू
घडीको साटो राखेको एउटै मात्र दुमो सेख्खीने भाले बासेपछि अन्तरे काका उठ्छ। ऊ उठ्दा ठिक ३:३० बजेको हुन्छ। उठेर घर धाराको चिसो पानी अनुहारमा तीन पटक छेपेपछि उसले दैनिक कार्य सुरु गर्छ।
अस्ति कमान जानु हतारमा भाँच्नु नभ्याएको मकैका ढोँड आज आईतबार मिहिनेत गरेर भाँच्ने उसले अठोट गरेको छ। त्यसैले बिहानै सुख्खा रोटी र फिक्का चिया खाएर ऊ बारीमा पस्छ। श्रीपञ्चमीको दिन खेवर गरेको मकैको ढोँड निकै मल पनि पुगेर होला ठँस-ठँस परेका छन् त्यसैमा सिमी पनि लगाएका थिए। अहिले ती सबै सुकेर उखेल्ने बेला भएको छ।
कमानको लागि आईतबार भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण दिन हो। त्यही दिन, सबै थोक गर्नै पर्ने हुन्छ। समाजको मिटिङ्ग, संस्थाको चन्दा, हप्ताभरिको सौदापात जमा गर्नु, बारी कान्ला समाल्नु, लुगा धुनु, मज्जाले नुहाउनु इत्यादि-इत्यादि। यसैले यो एक दिन आईतबार पनि नहुनु हो भने कमानका मानिस कस्ता देखिन्छन् होला। अन्तरे काका सोँच्दै ढोँड भाँचिरहेको छ-‘फेरि पन्ध्रमा पाउने खर्चले यो सब थेग्नु धौधौ नै पर्छ। तर के गर्ने चियाबारीको हरियाली दृश्य जत्ति नै रमाईलो देखे पनि कमानेको मन रमाइलो हुन्न। चियाका गाछ जत्ति नै समान देखे पनि कमाने देखिँदैन। बरु, आइया....जोरले कराउँछ।’
तल्लो घरे माईला- ‘के भयो अई अन्तरे?’ भन्दै उसलाई हेर्न आउँछ।
उसको हत्केला फुटेको ढोँड तान्दा ह्वार्रै भएछ। हतार-हतार तल्लो घरे माईलाले बाँधिदिन्छ अनि कमानको डिस्पेनसरीमा पठाउँछ।
एक्लो अन्तरे रातभरि खुब सोच्यो। अब आफुलाई तातो चिसो हेर्ने पनि चाहिएको छ, यसो दाउ परे भित्र्याउने भयो। कमानका सबै हुलका केटीहरूको अनुहार स्मरण गर्‍यो तर उसले रुचाएको जस्तो अनुहार नै आएन। फेरि कोख्रे पट्टिका सबै स्मरण गर्‍यो। एउटा अनुहार आएर उसलाई कुत्कुत्यायो। पक्कै लगन जुरेको रहेछ, भोलिपल्टै उसले घर रमाइलो बनायो।
‘पुल्ठो पनि नठोसी बल्दैन’ भनेर धेरै पटक अन्तरे काकाले पुल्ठो बाल्ने कोसिस गरे पनि त्यो आखिरमा बलेन नै। महिना दिनमै स्वास्नीले उसको घर त्याग गरी कता गई कसैलाई पत्तो भएन।
अहिले पनि दर्पणमा सूचना जारी छ-‘मेरो धर्म पत्नि म एकलो अन्तरेलाई तिम्रो न्यानो मायाको अभाव रहेको छ। यसैले तिमी जहाँ भए पनि चाँडै घर फर्की आऊ। म तिम्रो कुराइमा छु।’
Posted by Rupesh at 3:04 AM
विश्वास, यनसिंह स्कुल सिद्ध्याएर ग्रिफित्स् हाई स्कुल ७ मा छ। दुई साल भयो जान थालेको।
घरबाट उकालो तीन चुले, डाकबङ्गला हुँदै फेन्तमको दोकान पार गर्न पर्छ। लगभग सत्र बजार माथिहो स्कुल, ९० मिनट लाग्छ।
त्यो बीचको बाटाछेउ प्रायः हिँड्नेहरू ठूलो ढुङ्गोमाथि ससानो ढुङ्गा अड्काउने गर्छन्। केही मनोकामना गरेर। यदी त्यो अड्कियो भने मनोकामना पुरा हुन्छ रे भन्ने विश्वास पहिलेदेखि नै चलिआएको सुन्यो। विश्वासले पनि!
तेरो पनि केही मनोकामना होला, ला तैँले पनि अड्का- राकेशले भन्यो।
एकदिन एक्लै भयो बाटामा। त्यहीँ आइपुगेर टक्क अडियो। ढुङ्गा टिपेर फुत्त हान्यो। अड्किएन। फेरि कोसिस गर्‍यो। भएन। अनि सुरुसुरु घरतिर लाग्यो।
भोलिपल्ट लगत्तै फेरि त्यहाँ ढुङ्गा टिपी फुत्त हान्यो। ठ्याक्कै अड्कियो। खुसीले गदगद हुँदै स्कुलतिर लाग्यो।
दिन बित्दै गयो। समयले छोड्दै गयो तर विश्वासको मनोकामना पुरा भएन!
Posted by Rupesh at 3:01 AM
कठैबरा! शब्द !!
अहिलेघरि खोज्दैछ। निखोज
पल्टिरहेको छ। आलस्यको
मसानहरूको भाँडभैलो चलिरहेछ।
वाह! ताजुब छ
गाउँ सङ्गीतमय साँझ। क्रमशः
सेङ्चुरीमा धुन हालिरहेछ।
‘विज्ञानका विश्वकोश’ मा
पछ्चिमको प्रयोगशालामा कक्टिरहेको छ।
मनमोहक कहिले पार्छ त?
सुनिरहेको छु अहिले!
शान्ति कहिले ल्याउँछ त?
पर्खिरहेको छु अहिले!
देश सुतिरहेको छ!!
Posted by Rupesh at 2:55 AM
तिमी आउँछौ भन्ने,
त्यो दिनको सपना
मैले अझ भुलेकी छैन, भन्छौ होला तर
त्यही दिनको सपनाले
मेरो आँखामा खोपिल्टो पारेको छ।
आजकल भने ऐना हेर्दैपछि
खेल्दै रमाउने गरेकी छु। मनभरि
दबिएर बसेका तनावहरू
वास्तवमा रमाउनुको विकल्प
मेरो साथ दिने गरेको छ,
तिम्रो अनुपस्थिति भन्दा मिठो
यो खोपिल्टा भएको छ,
र नै त अब
तिमी आउनु र नआउनुमा
मैले समयको पाबन्दी ख्याल गर्न छाडेकी छु।
‘मैले मेरो पति गुमाएँ,
सारा सम्पती गुमाएँ,’ भन्ने
नियास्रोपन बिर्सन थालेकी छु।
यो एउटो सन्तान छ। जसले
ऊ हुनुको सत्य बुझेको छैन।
ऊ हुनुको यथार्थ जानेको छैन।
हिँड्न र बोल्न जानेको छैन।
जुन दिन उसले
हिँड्न र बोल्न जान्नेछ
त्यस दिन उसले
त्यो सत्य जान्नेछ
त्यो यथार्थ बुझ्नेछ अनि
त्यस दिन मैले फेरि
मलाई गुमाउनु पर्ने हुन्छ।
यसैले पनि हो
तिमी नआउनुको पीडालाई
बिस्तारै महत्त्व दिन छाडेकी छु।
निडर एउटा योद्धा जस्तो
रणभूमिमा निष्फिक्रि मर्न तयार छु।
अब मेरो हुनुको
केही औचित्य छैन,
ती प्रश्नहरूका उत्तर पनि छैनन्-
सारा सम्पती गुमाउनुको अनि
यो बाउबिनाको छोरो जन्माउनुको!’
तिमी नआउनुको पछि
निरुत्तर बनाएर गएको छ,
समाजको कठोर कारागारभित्र।
जतासुकै पाईला राख्न
कानुन बनाएको छ।
जुन कानुनले तिम्रो बलिदानको
यही उपहार दिएको छ,
मन खोलेर हास्नु पनि
मेरो चरित्र खोसिने डर हुन्छ,
कुनै कुनाबाट सधैँ हेरिरहने
मलाई लुकाउनै गाह्रो परेको छ!
धेरै यस्ता छन्
जसले मेरो पीडाको
च: च: च:
मबाट केही पाउने
मौका पर्खिरहेका छन्।
जस्बाट प्रत्येक साँझ
मैले मर्दै बाँच्दै गर्नु परिरहेको छ
ममा उनिहरूको विजयलाई
पराजय घोषित गर्न!
नारी भएर जन्मनू
नारीको पीडा सहेर हेर्नू!
नारीत्वसँग खेल्ने मोराहरू-
आन्दोलन गर नारी!
शोषण गर नारी!
अत्याचार गर नारी!
समाजले पनि बुझुन् न
नारीले जिउने गरेको पीडा?
ताजा बनाउँदै लगिरहेको छ
भोलि निको होला भन्दै
बाँच्ने गरेको कठोर समाजले
झन् म नारी खिहिँदै जाँदैछु!
मैले दैलो बाहिर पाईला राख्न
म नारी हुँ भन्ने
बिर्सने कोसिस गर्दैछु,
Posted by Rupesh at 2:53 AM
मेरा अन्य ब्लग
अन्तरेकाका घडीकोसाटो राखेको एउटै मात्र दुमो सेख्खी...
विश्वास विश्वास, यनसिंह स्कुलसिद्ध्याएर ग्रिफित्स्...
कठैबरा! शब्द !! नसुतेर उठेको सहरअहिलेघरि खोज्दैछ। ...
तिम्री नारी तिमीआउँछौ भन्ने,त्योदिनको सपना मैलेअझ ...
(C): AUTHOR. Ethereal theme. Powered by Blogger.